Kusuma Shoko raMwari | NWT
Bhaibheri rine mashoko atakanyorerwa naMwari anotibatsira mazuva ano. Rinotiratidza kuti tingararama sei upenyu hwakanaka uye kuti tingaita sei kuti tifarirwe naMwari. Rinopindurawo mibvunzo inotevera:
1 Mwari ndiani?
2 Ungadzidza sei nezvaMwari?
3 Ndiani akanyora Bhaibheri?
4 Bhaibheri rakarurama here panyaya dzesainzi?
5 Bhaibheri rinotaura nezvei?
6 Bhaibheri rakagara ratii nezvaMesiya?
7 Bhaibheri rakagara ratii nezvemazuva atiri kurarama?
8 Mwari ndiye anokonzera kutambura kwevanhu here?
9 Nei vanhu vachitambura?
10 Bhaibheri rinotii nezveramangwana?
11 Chii chinoitika kumunhu paanofa?
12 Tingava netariro yei panyaya yevanhu vakafa?
13 Bhaibheri rinotii nezvekushanda?
14 Ungashandisa sei zvakanaka zvinhu zvaunowana?
15 Ungaita sei kuti uwane mufaro?
16 Ungaita sei kuti usagara uchizvidya mwoyo?
17 Bhaibheri ringabatsira sei mhuri yako?
18 Ungaswedera sei pedyo naMwari?
19 Mabhuku emuBhaibheri akasiyana-siyana anotaura nezvei?
20 Ungaita sei kuti unyatsobatsirwa paunenge uchiverenga Bhaibheri?
MATSVAGIRWO ANOITWA MAVHESI MUBHAIBHERI
Bhaibheri rine mabhuku madiki 66 ari muzvikamu zviviri. Chekutanga chinonzi Magwaro echiHebheru nechiAramaiki (“Testamende Yekare”) uye chechipiri chinonzi Magwaro echiGiriki (“Testamende Itsva”). Mubhuku rimwe nerimwe remuBhaibheri mune zvitsauko zvine mavhesi. Kana paine pakanyorwa rugwaro, nhamba yekutanga inotevera zita rebhuku racho inoratidza chitsauko, uye inozotevera inoratidza vhesi racho. Saka kana pakanyorwa kuti Genesisi 1:1 panoreva kuti Genesisi chitsauko 1, vhesi 1.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Kusuma Shoko raMwari
nwt p. 5